Ma doonaysaa kobcinta GARAADKA ilmahaaga joogtee 5 arrimood | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ma doonaysaa kobcinta GARAADKA ilmahaaga joogtee 5 arrimood
(Hadalsame) 26 Luulyo 2021 – Xilliga ugu badan ee maskaxda ilmuhu kortaa waa Afarta sano ee ugu horreeya cimrigiisa. Marka la is barbar dhigo koritaanka maskaxda ee 4 sano ee u horreeya iyo inta ay maskaxdu korto inta hadhay ee nolosha qofka waxa ay khuabrada caafimaadku caddeeyeen in Afartaa sano ay korto boqolkiiba 50, boqolkiiba 50 ka hadhayna ay korto inta hadhay ee cimriga qofka.
Maadaama oo uu koritaanka maskaxda ilmuhu muhiim yahay afartaa sano ee hore waxa ay khubarada cilmigu soo jeediyeen arrimo si weyn uga qayb qaadan kara koritaankaas si uu u noqdo mid u dhaca sida ugu habboon ee ilmaha garaadkiisa iyo fariidnimadiisu ay kobocdo oo aynu afsoomaali usoo rognay talooyinkaasi waxa uu waalidiinta sharafta mudan kula talinayaa in ay ilmahooda kula dadaalaan talooyinkan dhaqangelintooda.
aanu ilmuhu ka heli karin cunto iyo caano kasta oo kale oo la siiyo. Sidaa awgeed waxaa fiican in hooyadu ay ilmaheeda naaska nuujiso waqti ku filan.
Previous articleGobolka Soomaalida oo iska dhex boodaya dagaallada Itoobiya isagoo aan is waydiin 6 SU’AALOOD
Next articleGoorta & goobta lagu kala saarayo Mogadishu CC vs Horseed SC oo la go’aamiyey